Buy Smart Swab (12,000Ks) in ကမာရွတ် on ipivi.com
ဓာတ်ခဲမလို ရာဘာ အပျော့နဲ. နာကျင်မှု မရှိ
ရာဘာ အပျော့နဲ. ပြုလုပ်ထားတာ ဖြစ်လို. နာကျင်မှု ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး
အသုံးပြုပြီးရင် လည်း ရေဆေး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ခေါင်းပို ၁၆ချောင်း ပါရှိပြီး လှည့်လှည် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးများအားလုံး ပို.ခ ၃ထောင်ကျပ်
တခြားမြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးပါတယ်။
အမည်: Smart Swab